विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २१, २०७५
विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय किन ?
भारतमा इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजीहरू (आईआईटी) स्थापना गरिएका बेला विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको अवधारणा बनिसकेको थिएन । तैपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अनुसन्धान र विकासका लागि विशिष्ट कोटीका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू उत्पादन गरी भारतलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर गराउन मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई सुदृढीकरण गरेर मात्र पूरा नहुने महसुस गरे ।
करेसाबारी पो कक्षाकोठा
विद्यालयले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस गर्‍यौं भने अहिल्यै जवाफ नआउन सक्छ । हाम्रो विद्याको निश्चित दिशा छैन । योग्य उत्पादन भए भने विदेश निर्यात, नभए देशमै अल्झिन यसो यताउति कामकाज । त्यति पनि नभए बेकार ।
श्रावण २०, २०७५
नूर गिराएर न्यायाधीश
न्याय दिने अधिकारीसँग न्याय माग्ने नागरिकहरू नतमस्तक हुन्छन् । न्याय दिनेले न्याय–अन्याय छुट्याउने नैतिक अधिकार राख्छ । न्यायिक मनले ऊ समृद्ध हुन्छ, न्यायिक चेतनाले सम्पन्न र न्यायिक विवेक पुर्‍याउन निपुण । न्यायाधीश बन्न सबै सक्दैनन् ।
मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, गोर्खा र डोल्पा जिल्लाका उच्च हिमाली भेगमा विश्वमा कतै नपाइने गुराँसको एक रैथाने प्रजाति पाइन्छ । सन् १९५२ मा उक्त गुराँस प्रजातिको नामकरण ‘रोडोडेन्ड्रन ल्वोन्डेसी’ भएको हो ।
श्रावण १८, २०७५
आमा हुन सजिलो छैन । हाम्रा जस्ता गाउँसहरमा त अझ । सार्वजनिक स्थलतिर शिशु कम देखिन्छन् भने स्तनपान असहज छ भन्ने बुझे हुन्छ । काखमा बच्चा लिएर घरबाहिर हत्तपत्त निस्कन गाह्रो मानिन्छ भने हाम्रो समाजमा समस्या छ । रोइरहेका शिशुलाई फकाउन गाह्रो हुन्छ । उनीहरूलाई फुलाउन जहीँतहीँ रोकिएर दूध चुसाउन संकोच हुन्छ ।
विवश जनता, बेखबर नेतृत्व
साउन पहिलो सातासम्म ओली प्रशासनको सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र निहत्था सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी विरुद्ध खनिएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशन बसेका डा. केसीलाई काठमाडौं फर्कन बाध्य तुल्याउन सुरक्षाकर्मीहरूले नांगो तथा निर्मम हस्तक्षेप गर्‍यो ।
श्रावण १७, २०७५
जनतासँग सदाचार खोजिँदैन
मौसम धमिलो छ भने जति पहाड उक्लिए पनि हिमाल देख्न आच्छुआच्छु पर्छ । सरकार त्यसरी नै सधैं आफू हिमाल बनेर अलग्गै टक्टकिन चाहन्छ । जनताबाट पर । कुहिरोरूपी कानुन र कर्मचारीबाट छेलिएर बस्न खोज्छ ।
एक लज्जित पुरुषको बकपत्र
पुरूषवादी व्यवस्था रहेसम्म प्रत्येक नारीले पाएको एकएक यातनाको हिसाब पुरूषले दिनैपर्छ । पुरुष भएकै कारण लज्जित छु म । लज्जित हुनका लागि मसँग जति कारणहरू छन्, त्यति त लज्जित नहुनका लागि स्पष्टीकरणका बुँदा पनि छैनन् । पुरुष भएर जन्मेकैले लज्जित हुनु नपर्ने हो । तर नारी भएर जन्मेकैले पाइला–पाइलामा बलात्कार र हत्याको सिकार हुनुपर्ने कारण के छ ?
श्रावण १६, २०७५
संसदीय सुनुवाइले उठाएका प्रश्न
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिएर पनि निर्णय रोकिएको छ ।
इतिहासमा हरेक दिन
इतिहासमा एक दिन हरेकपल्ट आउँदैन । जहिले आउँछ, थाहै नपाई विगतलाई डामेर जान्छ । भविष्यका लागि कुनै कीर्ति राखेर । इतिहास फुत्त उम्केर भविष्य बनिसक्छ जसलाई सपना देखाउनेहरू उपयुक्त शब्द खोजिरहन्छन् ।
‘लगानीको स्रोतमाथि तीव्र छानबिन गर्दैछौं’
कान्तिपुर संवाददाता माघ ७, २०७५
नेपालबाट विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी हुने सरकारी सूचीमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिएनन् । लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न सत्रमा नेपाल सहभागी हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा अन्तिम समयमा...
हावा महलजस्ता हवाई अड्डा
सम्पादकीय माघ ७, २०७५
हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दालाई आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्‍यो भने हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । यस्तो महँगो उद्धार विमानस्थल आसपास बस्ने गरिब सर्वसाधारणका लागि पनि बाध्यता हुने गरेको...
डावोस यात्राको अन्तर्य
टीका ढकाल माघ ७, २०७५
हरेक वर्षको जाडो याममा स्वीजरल्यान्डको सानो उत्तरी सहर डावोसले प्रभावशाली देशका राजनीतिक नेतृत्व, विश्वका धनाढ्य व्यापारी, नोबेल पुरस्कार विजेता विचारक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यकारीदेखि हलिउडका...
सम्पादकीय माघ ६, २०७५
किंवदन्तीका मञ्जुश्रीले चोभारको गल्छी काटेर काठमाडौं उपत्यकालाई बस्नयोग्य बनाएका थिए । उपत्यकाको त्यही पश्चिम–दक्षिणी निकासलाई क्षेत्रीय व्यापारिक स्थल बनाउने योजना सुरु भएको छ ।
कति कालो, कति सफेद ?
अंगराज तिमिल्सिना माघ ६, २०७५
नेपालमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको शंकास्पद धनसम्बन्धी तथ्यले धेरै कुरा उजागर गरेको छ । स्विस बैंकमा नेपालीको ५२ अर्ब रुपैयाँँ जम्मा भएको देखिएको छ । ५५...
अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत
गौरीबहादुर कार्की माघ ६, २०७५
अजेयराज पराजुली सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा वैदेशिक लगानी भनी आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशले फुकुवा भयो । न्यायाधीश...
बिनाविभेद आधारभूत शिक्षा
पविता मुडभरी पुडासैनी माघ ६, २०७५
सत्तरीको दशकमा शिक्षामा समान अवसरको विश्वव्यापी नारा उठेसँगै मेक्सिकोमा पादरी बनेका अस्ट्रियन नागरिक इभान इलिचले ‘दि स्कुलिङ सोसाइटी’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । त्यसले समाजमा विभेद...
टासी टेवा डोल्पो माघ ६, २०७५
नेपाल पर्यटन बोर्डले हवाई र स्थलमार्गबाट सन् २०१८ मा ११ लाख ७७ हजार ७३ विदेशी पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो संख्या २०१७...
तातोपानी कुण्डबाट कमाइ
नारायण घिमिरे माघ ५, २०७५
तीर्थ र आरोग्यका लागि संसारभर तातोपानी कुण्डमा ‘तातोपानी कुण्डयात्री’ धाउने परम्परा छ । तातोपानीको छहरामा नुहाउँदा होस् या कुण्डमा डुबुल्की मार्दा, तातोपना, मिनरल र सूक्ष्म तत्त्वले...
विमल निभा माघ ५, २०७५
बिदाको दिनमा पनि केटाकेटीहरूलाई स्कुलमा बोलाइएको थियो । कुनै महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै हुनुपथ्र्याे । यससम्बन्धमा कसैलाई पनि केही जानकारी दिइएको थिएन । त्यसैले कुरो गोप्य नै थियो । सबैलाई...
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »
विज्ञापन - अनलाइन
* Some part of this website uses AI-based services developed by WORXpro